Uhlalutyo lweMiboniso yeSpapchat, iiglasi zokurekhoda yonke into | Iindaba zeGajethi
Imiboniso ye-Snapchat: Iiglasi ezimangalisayo awuyi kusebenzisa kakhulu
UPablo Ortega | | Izixhobo, elektroniki, ngokubanzi, Reviews
Uyakhumbula ukuba ubudala begolide kwihlabathi lobuchwepheshe xa sasikholelwa ukuba Iiglasi ezifanelekileyo ziya kuba likamva? UGoogle wayeyinkampani yokuqala ukuphonononga le marike ngeGoogle Glass yakhe. Uyenzile iminyaka kunye neeprototypes ezibizayo (nge-1400 euro nganye) kwaye kunzima ukuyifumana. Ngoku, iprojekthi ibonakala ifile, nangona uGoogle wathi kwiinyanga ezidlulileyo "ukuba le nto ayiphelelanga apha", asivanga nto ngayo.
I-Snapchat igqithile kumzamo ongaphumelelanga kwiGlasi kaGoogle kwaye inesibindi sokuphuhlisa iiglasi zangoku ezixhobisa itekhnoloji ethi kum, undishiye ndingathethi. Awusoze ulindele ukuba inethiwekhi yentlalo iwenze kakuhle umsebenzi wasekhaya kwicandelo lezinto ezithengiswayo kunye nokumangaliswa kweZimanga, kodwa ukusetyenziswa kwazo kulinganiselwe.
1 Umsebenzi wesikolo owenziwe kakuhle: Uyilo lwangoku, oluluncedo
2 Cinezela kwaye Rekhoda
3 Umgangatho onomdla
4 Ngaba ukubonwa kufanelekile ukuba kuthengwe?
Umsebenzi wesikolo owenziwe kakuhle: Uyilo lwangoku, oluluncedo
Umahluko ophambili phakathi kweMiboniso kunye neGlasi kaGoogle uyilo lwabo. Ukubheja kukaGoogle yayingumhombiso olula ebusweni bethu owenza iscreen esincinci kwiliso elinye. Umsebenzisi kuye kwafuneka enze umzamo omkhulu wokujolisa ingqalelo yakhe kwiscreen. Nangona kunjalo, Imiboniso ibonelela ngobuhle, uyilo olucokisekileyo kwaye abo bathanda iiglasi zelanga bayakuxabisa (ewe, ukubonwa kungaphindeka njengezibuko zelanga). Nangona kunjalo, ayizukuvakala into ukuyinxiba ngaphakathi, apho uyakujongeka uyintlekisa ukuba uyayinxiba.
Uhlobo lwe Imiboniso yesiko, kodwa ikamva elinye ngaxeshanye, njengoko kubonisiwe kwizangqa ezibini ezibonwe kwisakhelo esingaphambili seglasi. Iilensi zijikeleziwe, kodwa sinako "ukonwaba" ngokukhetha ukugqiba okuhambelana nobuntu bethu, nokuba kumnyama, luhlaza okwesibhakabhaka okanye kubomvu. Ngokwam, ndikhetha imodeli enee-green tints-tints, kodwa kolu hlaziyo ndinethuba lokudlala ngemodeli emnyama, nayo ekhangeleka intle.
Kuqala bekungaqhelekanga ukuba ndibambe iiglasi. Xa uzibeka, uqaphela izangqa ezibini phezulu kwaye kubonakala ngathi zithintela i-engile yakho yokujonga. Kodwa iyayichaphazela into yokuba khanyisa kakhulu. Ungacinga ukuba ikhamera eyakhelwe kwiiglasi kunye nezibane ze-LED ziya kuba nobunzima obungaphezulu, kodwa inyani yokuba ezi glasi zeplastiki azinzima kangako iyamangalisa. Ewe kunjalo, kubonakala ngathi zenziwe ngezinto "ezingabizi".
Imiboniso iza kunye nayo Ityala le-beige-Snapchat Kwaye, kholwa ndim, xa ungazinxibanga, uyakufuna ukuzigcina zigcinwe kwindawo yazo kuba ayichani (iyothuka kwaye iwa ngengozi). Ngaphakathi kwityala, iiglasi zihlala kwitshaja ephucukileyo. Iindaba ezimnandi zezokuba kufuneka uphathe iintambo ezininzi ayisiyongxaki, kuba itshaja yeSpectrets inokugcinwa ngokufanelekileyo ecaleni kweiglasi.
Enye into ekufuneka ndiyibonisile yile lula esinokuthi sidibanise ngayo iiglasi bulumko kwiifowuni zethu ngeBluetooth. Ukwenza oku, nje ukuba siphethe iiglasi ezandleni zethu kwaye siqhagamshelene, siya kwisicelo seSpapchat emnxebeni, silayida kuseto kwaye sakuba silapho sikhe sicofe ukhetho «Imibukiso«. Kweli candelo ungadibanisa isincedisi sakho sefashoni esitsha, jonga ukuba zidityanisiwe, inqanaba lebhetri eliseleyo kwaye ujonge ukuba kukho uhlaziyo lwesoftware olukhoyo.
Cinezela kwaye Rekhoda
Iiglasi zeSnapchat ziyilelwe ukuphucula amabali kunxibelelwano lwasentlalweni. Emva kokuvela kwamabali e-Instagram, inkampani iphendule ngokukhawuleza ngesixhobo esidibanisa ngokulula kubomi bethu bemihla ngemihla kwaye, ikhuthaza, ngaphandle kwamathandabuzo, ukusetyenziswa kwenethiwekhi.
Kwimeko yam, ndingomnye wabo basebenzisi bani uthe "Sayonara!" ukuya kwi-Snapchat Xa amabali e-Instagram kunye neMiboniso yavela, bandenza ndasebenzisa inethiwekhi yokuncokola kwakhona. Ngoba? Ngoba Kulula kum ukuba ndibambe nawuphi na umzuzu wobomi bam bemihla ngemihla Cofa nje iqhosha kwiiglasi kwaye urekhode imizuzwana embalwa. Kukangaphi kwenzeka kuwe ukuba umhlobo wakho enze into ehlekisayo kwaye umcele ukuba ayiphinde kwakhona ukuyirekhoda kwiinethiwekhi zentlalo? Ngoku ungazibamba ezi ntlobo zemiboniso okokuqala. Kwaye ukuthatha iiselfie ngeiglasi kuyasebenza kwakhona, ukuba ubunokungabaza ngayo, kodwa ividiyo ayizukujongeka ilungile xa urekhoda xa udlulisa iiglasi kumhlobo wakho.
Ukuba uyabulela ubumfihlo bakho kwaye awuthandi umbono wokuba umntu ekurekhoda ngeiglasi zakhe, ungakhathazeki, kuba enye yeesangqa zangaphambili zeMiboniso ibonisa Izibane ze-LED zokwazisa abantu ngeenxa zonke Urekhoda ntoni. Le yayiyenye yezona zinto ziphikisayo nezigxekiweyo kwiGoogle Glass, kuba awuzange wazi ukuba umntu unokurekhoda okanye akuthathe iifoto ngaphandle kwemvume. Nangona kunjalo, ndizibonele ngokwam ukuba uluntu aluziva lukulungele ukujongana "noochwephesha" abanokuba barekhoda.
Eyona nto uza kuyixabisa yinyani rekhoda iividiyo ngaphandle kwezandla. Into endiyiphosileyo kwezi glasi yinto enokwenzeka yokuthatha iifoto, ukhetho olungenakwenzeka okwangoku. Izibuko zisinceda kuphela ukuba sizithathe Iiklip ze-10, 20 kunye ne-30 yesibini (kunye nenketho yokurekhoda ezininzi ngokulandelelana).
Wakuba udiniwe ukunxiba iiglasi zakho okanye ukulungele ukujonga izinto ezirekhodiweyo, kuya kufuneka uthumele izinto kunye nesicelo. Iindaba ezimnandi zezokuba akukho mfuneko yokuba siphathe ifowuni xa sihamba nayo yonke indawo, kuba iiglasi zinokurekhoda ngokuzimeleyo ngokupheleleyo.
Eli nyathelo linokukrwitsha, njengam. Ukuba ungomnye wabo bonqenayo ukukhupha iifoto kunye neevidiyo kwikhadi le-MicroSD, emva koko iya kukunika ubuvila obufanayo bokukhupha iiklip kwiiglasi.
Kwisicelo seSnapchat uya kubona ukuba indlela emfutshane ibonakala kwiiklip ezifakwe neMiboniso. Ungazikhuphelela kweli candelo, kodwa isaziso esibalulekileyo kubathengi: yi-plug okanye ibhetri ephathekayo efanelekileyo, kuba ibhetri ye-smartphone yakho iya kusokola. Amabali aya kukhutshelwa kwifomathi ye-SD ngokungagqibekanga, kodwa unokukhetha ukukhuphela izinto ozithandayo kwi-HD. Ewe kunjalo, kufuneka ndivume ukuba idatha idluliselwa ngesantya esiphezulu.
Njengesiqhelo kwi-Snapchat, umsebenzisi angongeza iifilitha kunye ne-geolocation yazo kwiziqeshana ezithathwe ngeglasi, kodwa ulibale ngokudibanisa iimaski ezihlekisayo okanye iimpembelelo ebusweni bakho (esisisixhobo esithandwayo ngabalandeli benethiwekhi yoluntu).
Ngomthwalo ngamnye weSpectacles siya kufumana malunga neeklip ze-100. Ugqibelele usuku lonke lomsebenzi. Emva kosuku lokusetyenziswa kakhulu, shiya iiglasi kwimeko yabo ehambelanayo. Cofa kwiqhosha lasecaleni ukujonga ukuba zingakanani iintlawulo ezongezelelweyo abazishiyileyo.
Umhlathi wam wehlile xa ndikhuphela ividiyo yokuqala ye-HD. Andizange ndicinge ukuba iiglasi ezilula kwaye zilula zinako fihla ubuchwephesha obuphezulu. Umgangatho uyamangalisa. Umsindo awukude emva, nokuba. Iividiyo zidlala kakuhle. Kuyamangalisa ukuba le khamera incinci ifihle amandla anjalo uzinze umfanekiso ngendlela engagungqiyo.
Ukongeza, iiglasi unikeze ithuba lokudlala ngekona yokujonga Xa sipapasha ividiyo kwi-Snapchat (ukuba siyayiguqula iselfowuni siyibeka kumfanekiso wesimo somfanekiso okanye ubume bembonakalo yomhlaba, kugxilwe kuhlala kwisifundo esinye ngokungathi besinxibe iiMiboniso, kodwa sihamba ngekona enkulu yezigcawu zibanjiweyo) .
Esona sithintelo kukuba, ukuba uyafuna khuphela ividiyo ukuze uyisebenzise nakweliphi na iqonga, emva koko i-Snapchat iya kuyifaka kwisakhelo esimhlophe esiphazamisa umgangatho.
Ngaba ukubonwa kufanelekile ukuba kuthengwe?
Kubonakala kucacile ukuba uSnapchat wayesazi ukuba ukuthengisa iiglasi ezintle ezinje kungayinto ebuthathaka, kodwa ukuthunyelwa kwezentengiso Benze eUnited States ukubakhuthaza kuye, ukutsho nje okuncinci, okrelekrele.
Kude kube kutshanje, abalandeli be-Snapchat kunye noochwephesha babenokuzithenga kuphela kwii-kiosks zethutyana ezivelayo kwilizwe liphela. Awuzange wazi ukuba izakuvela phi, okanye ngaliphi ixesha, okanye kuya kuthatha ixesha elingakanani ukuba iiglasi ziphele, kodwa ngalo lonke ixesha zivela kwenye indawo (nokuba yiVenice Beach eLos Angeles, eLas Vegas okanye nzulu kwiGrand Canyon), i Imiboniso ibithengisiwe ngemizuzwana.
Ngale ndlela, isebe lezentengiso likaSnapchat lidale "umkhuhlane" apho ukhuthaze uluntu ukuba lufumane isixhobo setekhnoloji ebesinqongophele kwaye, ke, sinike Umnxeba wedwa.
Nangona kunjalo, imeko itshintshile kwiveki ephelileyo ukuphuma kweglasi ngokusemthethweni kuthengiswa nge- $ 130. Okwangoku, ziyafumaneka e-United States kwaye asazi ukuba ulwandiso lwamazwe aphesheya luya kuba njani, kuba uSpapchat akakazanga kwanto ngalo nto.
Ngaba kufanelekile ukuthenga? Ngokwenene Ixabiso liyafikeleleka, kodwa lisikelwe umda. Yenzelwe abo basebenzisi bangenakuphila ngaphandle kwe-Snapchat. Ewe, iiglasi zifihla isiqwenga sobuchwephesha bobuchwephesha ngaphakathi, kodwa emva kweentsuku ezimbalwa zokusebenzisa kakhulu, ungaqala ukulibala ngazo kwaye zibe yinxalenye yengqokelela yezixhobo zakho ezilityelweyo.
Uyilo olulungileyo kwaye luphindwe kabini njengezibuko zelanga
-Iividiyo ezikumgangatho ophezulu
-Yongeza isakhelo esimhlophe kwiividiyo xa sifuna ukuzithumela kwezinye iinethiwekhi
-Awuyi kuzisebenzisa kakhulu kwixa elizayo
Uphengululo lwe: UPablo Ortega
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Imiboniso ye-Snapchat: Iiglasi ezimangalisayo awuyi kusebenzisa kakhulu
I-Gmail yandisa umda wokuncamathisela ukuya kuthi ga kwi-50 MB
I-256GB kwi-microSD esemgangathweni, yile nto uLexar ayibonisayo